किन भाँडियो अमेरिका कोरिया वार्ता ? – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ जेष्ठ १२ गते शनिबार १४:४६ मा प्रकाशित
गएको शुक्रबार उत्तर कोरियाले आफ्ना शक्तिशाली आणविक परीक्षणस्थल भत्काएको केही क्षणमै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने उत्तर कोरियासँग अर्काे महिना हुने भनिएको शिखर वार्ता अहिलेलाई स्थगित भएको घोषणा एकाएक गरे ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले गएको बुधबार उत्तर कोरियामाथि एउटा ठूलो आरोप लगाए। उनले भने , वार्तामा बस्ने त होइन कि उत्तर कोरियाको हालत लिबियाको जस्तो हुनुपर्छ । उनको आसय थियो लिबियाका पूर्व शासक माउमर गद्दाफिजस्तै उत्तर कोरियाको पनि हालत हुनेछ । वार्ताको वातावरण तयार भइरहेका बेला अकस्मात पेन्सबाट आएको यस अभिव्यक्तिप्रति उत्तर कोरिया आक्रोसित भयो । उसको आक्रोसले अमेरिकालाई पनि क्रुद्ध बनायो । तर यो गल्ती आफ्नो होइन भन्छ उत्तर कोरिया । यसरी वार्ताका लागि बनेको वातावरण एकपछि अर्काेगरी विथोलिँदै गयो ।
वार्ता रोकिएको पत्र बिहीबार राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तरका नेता किमलाई पठाएका छन् । पत्रमा धेरै कटुता छैन । उनले लेखेका छन् , तपाईँहरुतर्फको आक्रोस र दुस्मनीको भावले गर्दा यो शिखर बैठक जुन १२ मा नगर्नेमा अमेरिका पुगेको छ तर वार्ता सधैँलाई स्थगित होइन । अनि उहाँले नेता किमलाई फोन गर्नु पनि भन्नुभएको छ । फेरि त्यस पत्र पढिसकेपछि उत्तरका नेता किमले पनि आफूहरु अमेरिकासँग जुनसुकै समय पनि वार्तामा बस्न तयार छौँ भनेका छन् ।
अमेरिका अझै पनि केही शर्त उत्तर कोरियाले पूरा गर्नुपर्छ भन्छ तर उत्तर कोरिया आफूले गर्नुपर्ने भन्दा बढी गरेका छौँ भन्छ । शान्ति सम्झौता बमोजिम नै अणु अस्त्रको उत्पादन नगरेको तथा परीक्षणस्थल पनि भत्काएको तर यसको मूल्यांकन नभएको उत्तर कोरिया बताउँछ । तर पनि यतिखेर विश्वको चासो र खोजीको विषय हो— अमेरिका कोरिया वार्ता किन भाँडियो र कहिले हुन्छ ? यी हरेक प्रश्नले शिखर वार्ता र कोरियाली प्रायद्धीपमा शान्ति खोजेको छ ।